နံကရိုင်းမယ်တော်၏ အညှိး-၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နံကရိုင်းမယ်တော်၏ အညှိး-၃
Posted by may flowers on May 23, 2012 in Creative Writing | 17 comments
ဒါနဲ့ ကိုတင်ဆောင်လည်း သူ့ကျွဲတွေခတ်နေတဲ့ဘက်ကိုပြေးသွားမယ် အလုပ်မှာ တဲထဲ
မှာရှိတဲ့ သူတွေကမသွားဖို့တားကြပါတယ်။ ကျွဲနှစ်ကောင်ဟာ ခွန်အားလည်းကြီးတဲ့အ
ပြင် ဒေါသတကြီးနဲ့အညှိးတကြီးခတ်နေကြတာမို့မသွားဖို့တားနေကြခြင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကို
တင်ဆောင်ကတော့ သူ့ကျွဲတွေကိုသူယုံကြည်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှသူ့ကို အန္တရာယ်မ
ပြုဘူးလို့ယုံကြည်ထားတာကြောင့် ၀ါးခုတ်သမားတွေနဲ့ တစ်ရွာတည်းသားကျွဲဆွဲသမား
တွေကို ပိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့လက်ပြပြီး အချင်းချင်းဒေါသတကြီးခတ်နေကြတဲ့ သူ့ကျွဲ
”ဂါးကြီး…ဂါးလေး” လို့အသံကျယ်ကျယ်အော်ခေါ်ပြီးထွက်သွားပါတယ်။ ဒေါသတကြီး
ခတ်နေကြတဲ့ ကျွဲနှစ်ကောင်လည်း ကိုတင်ဆောင့်အသံ ကြားချိန်မှာတော့..ချာကနဲ
လှည်ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။ ကိုတင်ဆောင်ကလည်းသူခေါ်တာပြန်ကြည့်တဲ့ အတွက်
အဆင်ပြေလောက်ပြီထင်ပြီး အနားကိုကပ်သွားချိန်မှာတော့ …
မမျှော်လင့်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဟာ အမျှော်လင့်ပဲဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ကိုတင်
ဆောင့် အသံကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်ကြတဲ့ ဂါးကြိီး၊ ဂါးလေး ကျွဲညီနောင်နှစ်ကောင်
ဟာတစ်ခဏတွေကနဲဖြစ်သွားကြပေမဲ့ ရုတ်တရက်သူတို့သခင် ကိုတင်ဆောင်ရှိရာ
ဘက်ဆီကို မီးရထားတွဲကြီးအရှိန်ထိုးထွက်လာသလို အရှိန်နဲ့ပြေးဝင်ခတ်ကြပါတော့
လုံးဝမမျှော်လင့်ထားတဲ့ အဖြစ်မို့လို့ကိုတင်ဆောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်လေးတောင်မရခဲ့
ရှာပါဘူး။ ပထမရောက်လာတဲ့ ဂါးလေးရဲ့ဂျိုကြားမှာ ကားကနဲမြောက်ပြီးတော်တော်အ
မြင့်ကိုရောက်အောင်ပါသွားပါတယ်။ နောက်ပြန်ကျလာချိန်မှာ ဂါးကြီးကတဖန်ထပ်ဝှေ့
လိုက်ပြန်တာကြောင့် အပေါ်ကိုပြန်မြောက်တက်သွားပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဂါးကြီးတလှဲ့
ဂါးလေးတလှဲ့နဲ့ အခတ်ခံနေရတဲ့ကိုတင်ဆောင်ခင်မျာ မြေပေါ်ကိုတောင်ပြန်မကျနိုင်ပဲ
လေထဲမှာတင် သူချစ်ရသော သူယုံကြည်ရသော ကျွဲနှစ်ကောင်ရဲ့ ရက်ရက်စက်စက်
အဖြစ်အပျက်ဟာ အချိန်ခဏအတွင်းမှာပဲ လျှင်လျှင်မြန်မြန်ဖြစ်သွားတာမို့ကျန်ကျွဲသ
မားတွေလည်း ခဏတော့ကြောင်ကြည့်နေမိကြပါတယ်။ နောက်မှသတိရလာကြပြီး မီး
တုတ်နဲ့ပစ်သူကပစ် အော်ဟစ်ခြောက်လှန့်တဲ့သူကလှန့်နဲ့ ၀ါးခုတ်သမားတွေစခန်းချ
ရာ တဲစုလေးတွေဟာ ကမ္ဘာပျက်သလားမှတ်လောက်အောင်ဆူညံပွက်လောရိုက်နေပါ
တော့တယ်။ တဲတွေဘက်ဆီက ဆူဆူညံညံအသံတွေ အော်ဟစ်မောင်းထုတ်သံတွေ
မီးတုတ်တွေ လေးခွတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် ဂါးကြီးနဲ့ဂါးလေးဟာထွက်ပြေးမယ်
ထင်ရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုတင်ဆောင်ကို နှစ်ကောင်သားဝိုင်းခတ်နေကြရာက
ပါပဲ။ ပုဆိုးကျွတ်သူကကျွတ် သစ်ပင်ပေါ်ကိုပြေးတက်ရတော့ အင်္ကျီပြဲသူကပြဲနဲ့ ပေါ့။
တစ်ယောက်ကိုမှ မမိတော့တဲ့အခါ ဂါးကြီးနဲ့ဂါးလေးဟာမြေပြင်ပေါ်မှာ သွေးတွေအရွှဲ
သားနဲ့လဲကျအသက်ငင်နေရှာတဲ့ သူတို့သခင်ကိုတင်ဆောင်ရှိရာကိုပြန်ပြေးသွားပြီး မ
ကျေပွဲ အဖြစ်ဆက်ခတ်ကြပြန်ပါသေးတယ်။ သူတို့စိတ်ကြိုက်ခတ်ပြီးချိန်မှာတော့
ကျွဲကြီးတွေ တောနက်ဘက်ဝင်ရောက်သွားပေမဲ့လို့ သစ်ပင်ပေါ်က လူတွေလည်းချက်
ချင်း ဆင်းလာရဲကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ မတော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာရင် ခက်ရချည်
ရဲ့ ဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်ကြောင့် သစ်ပင်ပေါ်မှာတစ်နာရီလောက်ထိကြာအောင်ဆက်နေ
နေကြပါသေးတယ်။ တစ်နာရီလောက်ကြာမှ ကျွဲကြီးတွေပြန်မလာလောက်တော့တာ
သေချာမှ သစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းလာနိုင်ကြတာပါ။ သူတို့တွေအောက်ကိုရောက်ပြီး ကိုတင်
ဆောင်ရှိရာကိုပြေးသွားပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ သနားစရာကိုတင်ဆောင်ခင်
မျာ သူယုံကြည်ခဲ့ရသော သူချစ်ခင်ခဲ့ရသော သူ့ရဲ့ကျွဲနှစ်ကောင်ရဲ့စနက်ကြောင့် အူတွေ
အပြင်ကိုထွက်ကျပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ရင်ဘက်ဟောင်းလောင်းကြီးပွင့်လျှက် သေဆုံး
၀င်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ အရေးပေါ်ကိုတင်ဆောင့်မိသားစုကိုအရင်ပြောပြဖို့ လှည်းဆင်ပြီး
ပြန်သူကပြန်၊ ကိုတင်ဆောင့်သက်မဲ့ကိုယ်ကိုသယ်ဆောင်ဖို့လုပ်သူကလုပ်နဲ့ တော်တော်
ရွာကိုလှည်းလွတ်နဲ့ အပြေးပြန်လာကြပြီး ကျန်တဲ့လှည်းတွေက ကိုတင်ဆောင့်ကိုယ်ကို
သယ်မပြီးပြန်လာကြတာပေါ့။ ရွာရဲ့ဓလေ့အရ ရွာ့အပြင်မှာသေခဲ့တဲ့လူဆိုရွာတွင်းကိုအ
သွင်းမခံကြပါဘူးတဲ့။ ရွာနာတယ် ရွာခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲအယူဝါဒတွေကြောင့် ကို
တင်ဆောင့်ကို ရွာပြင်သင်္ချိုင်းမှာသာထား ထားရပြီး မနက်ရောက်ခါမှမီးသင်္ဂြိုလ်လိုက်
ရရှာပါတော့တယ်။ ကိုတင်ဆောင့်မိန်းမ ဒေါ်မိသေးခင်မျာမှာ တော့ကလေးငါးယောက်နဲ့
ထူးဆန်းစွာပဲ ဂါးကြီး၊ဂါးလေးကျွဲနှစ်ကောင်ဟာကိုတင်ဆောင်ဆုံးပြီး ရက်လည်ပြီးခါစ
အချိန် လောက်မှာအိမ်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ ဂါးကြီးတို့ညီနောင်ရွာ
ထဲကို ၀င်လာတော့လူတွေကြောက်လိုက်ကြတာလေ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ရွာရှိလူ
ကုန် မိမိတို့အိမ်ထဲကိုအသီးသီးပြေးဝင်ပုန်းကွယ်နေလိုက်ကြတာ ကလေးငိုသံတောင်
မကြားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်။ ဂါးကြီး၊ ဂါးလေးကလည်းဘယ်သူ့
ကိုမှတောင်စောင်းငဲ့ လို့မကြည့်ကြပါဘူး။ မိမိအိမ်ရှိရာသို့သာ တန်းတန်းမတ်မတ်ပြန်
လာကြပြီး ယခင်မိမိတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ တင်းကုန်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးပဲဝင်ရောက်ပြီ
နားနားနေနေ၀ပ်လှဲနေကြပါတယ်။ ကျွဲတွေအိမ်ထဲဝင်ဝင်လာချင်းမှာတော့ ပထမဒေါ်မိ
သေးကြောင်သွားပါသေးတယ် နောက်မှသူ့ယောက်ျားကိုသတ်တဲ့ကျွဲတွေဆိုပြီး မိမိကို
ခတ်ကာမှခတ်ရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မျက်စိထဲတွေ့ရာ ထင်းချောင်းကြီးကြီး တစ်ချောင်းကို
ကိုင်ပြီးကျွဲနှစ်ကောင်ရှိရာကို အပြေးခုန်လွှားသွားပြီးဒေါသတကြီး အကြိမ်ကြိမ်တဖုန်း
ဖုန်းမြည်အောင် ရိုက်နေမိပါတယ်။ထူးဆန်းတာက ကိုသာဆောင်ကို အသေခတ်သတ်
ခဲ့တဲ့ကျွဲရိုင်းနှစ်ကောင်ဟာ မိသေးဒီလောက်ချနေ ရိုက်နေပေမဲ့ရန်မူတဲ့အရိပ်အယောင်
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို ဆက်လက်တင်ပြပေးပါ့မယ်။ ခုပိုစ့်ခေါင်းစဉ်ကို မောင်ဘလှိုင်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်
နဂရိုင်းအစား နံကရိုင်းလို့ပြန်ပြင်ရေးထားပါတယ်။ ဒီပိုစ့်ကိုမရေးခင်က နဂရိုင်းလား နံဂရိုင်းလားမသေ
ချာတာကြောင့် စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းမှာ ပြန်ကြည့်ပါသေးတယ်။ မတွေ့လို့လွယ်လွယ်ပါးစပ်ကထွက်
တဲ့အတိုင်း နဂရိုင်းလို့ပဲရေးတင်မိတာပါ။ မောင်ဘလှိုင်ရေ ကျေးဇူးအထူးပါနော်။ ကျွန်မရဲ့ လွဲမှားမှုအတွက်
အေးဗျာ. စိတ်ဝင်စားစရာမို့ စောင့်ဖတ်ပေးပေါ့မယ်။မြန်မြန်ရေးပေးနော်။ဟီးးးးး
ဟိုက်. ဖမ်းရဲဘူးလေ. ဒေါ်မိသေးရိုက်ထားလို့ သွေးစက်စက်နဲ့ ဆို။
မလုပ်ပါနဲ့ ဂျ. သားကသေချင်သေးဘူး။မိန်းမ ယူအုံးမှာ
မေလေးရေ ဒီအပိုင်းကိုတော့ နံကထိုင် လို့ ခေါ်တဲ့ မုန့် တွေစားပြီး ဖတ်သွားတယ်ကွဲ့ ။ ဇါတ်သိမ်းပိုင်းမှာ ဂါးကြီးတို့ ပြန်ပြီး အမဲဖျက်ခံရမလား ဆိုတာ စောင့်နေတယ်နော
မ may flowers ရေ
တခါတလေ ကျတော့လည်း ဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ သရဲတစ္ဆေတွေ အကြောင်းတွေကို ဖတ်ရတာ အရသာ တမျိုးပေါ့ဗျာ။ မုန့်ဟင်းခါးကို ငရုတ်သီးစပ်စပ် ထည့်စားသလိုပေါ့။ ငရုတ်သီးချည်းပဲ စားမယ်ဆိုရင်တော့ အရသာမရှိပေမယ့် အခြားစားစရာ လေးနဲ့တွဲစားရင် ပိုစားကောင်းတတ်တဲ့ သဘောပါ။ ကျနော် သိသလောက် နံကရိုင်းမယ်တော်နတ်က ၃၇ မင်းနတ်စာရင်းထဲမှာ မပါပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုးကွယ်သူများတဲ့ ဒေသန္တရနတ်ပါ။ မွန်တိုင်းရင်းသားတွေ အများဆုံး ကိုးကွယ်ပြီး မွန်ရိုးရာနတ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ရေငန်ပိုင် ဦးရှင်ကြီးဟာလည်း ၃၇မင်းနတ်စာရင်းထဲမှာ မပါတဲ့ နာမည်ကြီး ဒေသန္တရနတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်အမြင်အရ ဆိုလျှင်တော့ ယုံကြည်တာ မယုံကြည်တာ အပထား ကိုယ်ကသွားပြီးတော့ မစော်ကားနဲ့ပေါ့။ နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် လူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကို မလေးမစား လုပ်ရင် မကြိုက်တတ်ဘူး မဟုတ်လား။ ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက် အတွက်တော့ ဘုရားကိုကျော်ပြီးတော့လည်း ကိုးကွယ်စရာတော့ မရှိပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ သူတို့ကို မေတ္တာပို့တာကတော့ လုပ်ကောင်းပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်San Hla Gyi ရေ ကျွန်မလည်းနတ်တွေကိုမကိုးကွယ်ပေမဲ့ သူတို့တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ
တော့ ယုံကြည်သူပါ။ သူတို့ကိုစော်ကားလိုစိတ်နဲ့ ဒီပိုစ့်ကိုရေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်။ မကိုးကွယ်
ပေမဲ့မစော်ကားနဲ့ဆိုတဲ့ စကားကိုကျွန်မလည်း ထောက်ခံပါတယ်။ တစ်ချို့မြန်မာတော်တော်များများ
ကျွန်မသိပ်သဘောမကျပါဘူး။ ကိုယ့်ထက်အသက်တစ်နှစ်၊ တစ်ရက်ကြီးသူကိုတောင်ရိုသေရမဲ့ လောက
ကိုးကွယ်ရာအဖြစ်တော့မထားထိုက်ဘူးလို့ ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ မိဘတွေလက်ထက်ကလည်း
နတ်ကိုအိမ်မှာထားပြီးကိုးကွယ်ခဲ့တာမရှိခဲ့သလို ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်း ရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပေမဲ့
ကိုပေရေ နံကထိုင်တွေစားပြီးဖတ်နေတယ်ပြောလို့ ကျေးဇူးပါနော်။
ဆက်ဆက်စောင့်နေအုံးမယ်နော်… နော်လို့… ညန်ညန်လေး…..
အောက်နတ်တွေနဲ့လူ ဆက်ကွယ်မှု မရှိလို ငြင်းရခက်တယ်။ ကျနော်ယုံတာတော့ လူတွေရဲ့ ဘုန်းကံအပေါ် အများဂျီးတည်ဒယ်။ ဘုန်းကံရှိရင် သတ္တိရဒယ် အစွမ်းရှိဒယ် လုပ်သမျှဖြစ်တယ်.. အတိတ်ကံကြီးရင် ပစ္စုပ္ပန်အကျင့်သီလ စတာတွေနဲ့ သိပ်မဆိုင်လို့ ပြောရင်ရဒယ်။ လူဂ သိပ်အားကြီးရင် အဲဒီမမြင်ရဒဲ့ အောက်နတ်တွေဂို တွန်းလှန်ကျော်လွှားနိုင်လို့ သူတို့မရှိသလို ဖြစ်ရဒယ်။ ပြောင်းပြန်ယူရင်ဒေါ့ ပစ္စုပ္ပန်ဘယ်လောက်ပဲ ဖြည့်ဖြည့် အတိတ်ကံ အားသိပ်နည်းရင် သူများအလွှမ်းမိုး ခံရဒါပဲ။ ယေဘူယျ အမှန်တရားဖြစ်တယ်…သို့သော် ဒါဂိုဘဲ တလွဲသုံးဂျ၊ အစွမ်းပြန်တင်ဖို့ မကြိုးစား အရာရာဂို မူသေတွက်ကြဒေါ့ မမြင်ရဒဲ့ ပရလောကဆိုဒါ အဓိပ္ပါယ်မဲ့အဖြစ် ရုပ်ကြမ်းဝါဒီများရဲ့ ကဲ့ရဲပြစ်တင်မှု ခံရဗျန်ဒယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာပဲကြည့်လေ အစွမ်းထက်တဲ့ ဆရာတော်ကြီးများ ရှိနေရင် သာသနပအကျင့် နတ်စိမ်းစတာတွေ ပုန်းရှိုးကုန်တယ်။ အားနဲဒဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ ပြန်ပေါ်လာတာပဲ။ အနောက်နိုင်ငံများမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ယူဆပါဒယ်။ ဒါဂို မြဲတယ် ဘယ်ဒေါ့မှ မပြောင်းလို့ ယူဆရင်ဒေါ့ အဲဒီနတ်အယူ အစွန်းရောက်သမားများထက် သာမထူးလို့ ပေါဘာယဈေ။။။ သဂျီ့းကျုပ်ပေါဒါဂို ဆယ်ခေါက်ဖတ်ပြီး ညအိပ်ယာဝင်ရင် နဖူးပေါ်လက်တင် (သဂျီးဂဒေါ်ပေါ်မှားမတင်နဲ့) သေချာစဉ်းစားဘာ..။ သဂျီးဖုံးရှိနေဒုံးပြောဒါ..ဘီလ်မဆောင်နဲ့ဒေါ့ဒဲ့အခါကြရင် ဘယ်သူမှလာမကယ်ဘူး..။
ဘုန်းကံရှိတဲ့.. ဆရာတော်ကြီးများက.. အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီး.. နတ်တွေအကုန်.. နေထိုင်ဖို့.. ကမ္ဘာအေးကလှိုင်ဂူလို.. လှိုင်ကြီးဆောက်…
မင်းမိန့်..ဆတော်မိန့်(မဟနမိန့်)နဲ့.. အတွင်းအပြင်ဘေးဘီ နတ်တွေ..၀က်အူတွေအကုန်.. သံရေကြို..အဲ..အဲ.. အထဲဝင်ခိုင်းပြီး. နတ်လှောင်ဂူလုပ်သင့်တယ်ထင်မိတယ်..
မြန်မာပြည်ရဲ့.. ထေရ၀ါဒ နတ်ဗုဒ္ဓ..အဲ..အဲ.. ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို.. ဖျက်စီးသူနတ်များလို့.. သမိုင်းအမည်ထင်မည်သာဖြစ်ပါတယ်လို့.. သမ္မာဒေ၀နတ်မင်းများကိုယ်စား.. ကျုပ်ကအကြောင်းပြန်လိုပါတယ်..
အဲဒီနတ်တွေဟာ.. ဗုဒ္ဓသာသနာအစစ်ကိုဖျက်စီးပြီး.. ဗုဒ္ဓကိုစော်ကားနေတာ.. လွန့်လွန်လွန်းနေတာမို့.. ၀င်ပြောတာ..
တကယ်တော့.. ဒါမျိုး.. နတ်တွေထောင်ချပစ်တာ.. အနော်ရထာမင်းလုပ်ဖူးတယ်.. မှတ်တယ်..။
ကိုယ်ဆန္ဒအလိုအတိုင်း အတင်းလုပ်မှဒေါ့ ဓမ္မမည်ဘာအုံးမလား… အချိန်ကြာလာဒါနဲ့အမျှ အကျင့်သာသနာ ညှိုးနွမ်းလာဒယ် (ရှေးလူဂျီးစဂါးပြောရယင် ဆုတ်ခေတ်ရောက်လာလို့) သီလ သမာဓိ ပညာဆိုဒဲ့ သာသနာ ချို့ယွင်းလာလို့ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှု အားနည်းလာဒယ်။ ဒီဒေါ့ ဘုန်းကြီးလည်း ဘုန်းမကြီးနိုင်ဒေါ့ဘူး..။ ဘုန်းကြီးဖို့ ကြိုးစားဒါရှိပေမည့်လည်း ဘုန်းကြီးဖို့ အတိတ်ကံ ပါမလာဒေါ့ ဘုန်းမကြီးဒေါ့ဗျန်ဘူး ဒါနဲ့ပဲ ဖြတ်လမ်းနည်း သာသနာပ အကျင့်တွေနဲ့ ပါဝါတင်ရဒယ်။ မတင်သူဒွေဂ ဘယ်လောက်ပဲဓမ္မစကားပြောပြော အကျင့်သာသနာ မပြနိုင်မှဒေါ့ နောက်ရောက်တော့ဒါပေါ့။ ဖြစ်ပျက်သဘောအရပြောရင်ဒေါ့ ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်တာပဲ၊ သို့သော် အပျက်မှာတင် လမ်းမဆုံးနေဖို့လိုဒယ်။ ပရမတ္တသစ္စာကို ပညတ်နယ်မှာ တလွဲသုံး ကိုယ်လိုရာ ဆွဲမသုံးဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ပုထုဇဉ်ဂ ပုထုဇဉ်စဂါးပြော အောက်အရိယာက ပညတ်မစင်သေးဒဲ့ ဓမ္မစကားကိုပြော အထက်အရိယာက လောကုတ္တရာဖက်ကို အာရုံညွှတ်ရဒယ်။ နို့မို့ရင် ရွာထဲဂ ပစ်စုတ်ပံဂိုဏ်းသားဒွေလို မိုးပြောဂျိုးပြော ဖြစ်နေမယ်။ ငယဲဆင်းရမှာ မကြောက်ဘူးလား။ ဆီပူအိုးဒဲ အနှစ်ခံယ၊ ငယဲခွေးဂျီး အဆွဲခံယ၊ ဆူးခက်ပင်ပေါ် တက်ယနဲ့ ကြောင်းဆယာဂျီး…
သီဟို၌ကျွန်းမှာ နောက်ပိုင်းသံဃာယနာတင်မည့် ဆရာတော်လောင်းလျာကို ဥပဇ္ဇယ်ဆရာ ရဟန္တာမထေရ်က တရားပေးတဲ့အခါ သဂဒါဂမ်မဂ်မှာတင် ရပ်ထားဒယ်.. အကြောင်းဂ အဲဒီထက်လွန်သွားရင် လောကီနဲ့ မအပ်စပ်တော့ဒဲ့ ပရမတ်ကို အာရုံအပြုများ သို့မဟုတ် လုံးလုံးလျားလျား အာရုံပြုပြီး သံဃာယနာတင်ပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး လစ်လျူရှုလိုက်မှာဆိုးလို့ဒဲ့။ (သဂျီး လက်ခံဂျင် လက်မခံဂျင်နေ.. ဘုန်းကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာတခုပေးဒါ) ဆရာဂ ဈာန်အဘိညာဉ်ရ ရဟန္တာဖြစ်ပေမဲ့ အဲဒီအတွက် ဘုန်းကံပါ မလာဘူး..။ သင့်တော်ဒဲ့သူ စောင့်ရဒယ်.. နည်းပေးလမ်းပြပဲ လုပ်နိုင်ဒယ် ပြောလေကဲလေ မန်းလေပြဲလေ သဂျီးဇုတ်ရဲ့…။ :mad:
တစ်နှစ်တခါ ဘေးကပ်ရက်အိမ်က နတ်ကနားပေးပီဆို
နားညီးတဲ့ဒဏ်ကို ၃ ရက်လောက်လှိမ့်ခံနေရတာ…
ကျွန်မတို့တော့ အနားကအိမ်နတ်ကနားပေးပြီဆို ပျော်တယ်ကိုကြီးမိုက်ရေ။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီး ဇာတ်သိမ်းအထိစောင့်ဖတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ… ဆက်လက်ရေးသားပါအုံး……အားပေးနေပါတယ်… :D
ခု တင်ပေးလိုက်ပါပြီ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
အဲဒါ နတ်တွေကချည်းအပစ်လွှဲချနေလို့လည်းမရဘူးလေသဂျီးရဲ့။ အဓိက ကတော့သူတို့စားပေါက်ပိတ်
မှာ ကြောက်ပြီးနတ်တွေကိုစွတ်ပြီးအမွှန်းတွေတင်ပြီး သက်ကယ် ၇ပြစ် ကြမ်း ၇ ချောင်းရှိရင်တောင် အိမ်
မည်တာကြောင့် အိမ်တွင်းနတ်ကို မဖြစ်မနေကိုးကွယ်ရမယ်…မကိုးကွယ်ရင် ဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်နဲ့
ဖြဲရဲခြောက်နေတဲ့ နတ်ကတော်တွေကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ နောက်လူတွေရဲ့အသိပညာဗဟုသုတမရှိပဲ
ကိုယ့်အတိတ်ကံကောင်းလို့ စီးပွားလေးနဲနဲများမတက်လာလိုက်နဲ့ ဒါနတ်ကြောင့်စီးပွားတက်တာ နတ်မ
လို့ဆိုပြီးလွှဲမှားတဲ့ အယူအဆတွေကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ နတ်ကိုကိုးကွယ်ရင်ငါတော့လိုတာပြည်တော့မှာပဲ
ဆိုပြီး ကိုယ့်ရဲ့လောဘတွေကြောင့်ကိုးကွယ်ကြတာတစ်ကြောင်း ဒီလိုအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် မြန်
မာပြည်မှာနတ်သက်ရှည်နေရတယ်လို့ ကျွန်မတော့ထင်တာပဲလေ။ အားလုံးကိုနတ်တွေပေါ်ပဲ အပြစ်ပုံမချပဲ